Paompy fanosorana, motera herinaratra solika, paompin-drano - Jianhe
Faritra fanosorana menaka fanosotra
Faritra fanorana solika mandeha ho azy
Menaka / menaka paompy
Rafitra fanosorana solika
SYSTEMA ROBOTIKA INDUSTRIEL voafetra, AN'NY JIAXING JIANHE MATERIAL CO., LTD, dia miasa amin'ny famolavolana, famolavolana ary famokarana rafitra fanosotra afovoany, rafitra fanosotra mandeha ho azy, rafitra fanosotra diloilo, rafitra fanosotra menaka ..
HTD Series Electric Pump Lubrication
DR Series Electric Electric / Pump Grey Lubrication ...
Pump DRD Series Oil Electric Lubrication Pump ...
XEP20 / XEP20A Paompy plunger menaka manitra
Paompy fanosotra tanana LSG 500CC / 800CC
HP-5 Volavola kely tanana plastika piston kely po ...
Paompy fanosorana afovoany fanosotra elektrika
Fitaovana fandrefesana rafitra fandrosoana MVB
Fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery
11 Aog 2020
Fametrahana sy fikojakojana ho an'ny rafitra fanosorana afovoany
1) fantsom-pamatrarana setroka avo lenta sy kojakoja iraisana Ho an'ny fantsona solika (distributor pump-distributor) pipa menaka faharoa (mampifandray ny distributor-lubrication point), ny savaivony ivelany an'ny vodin-kazo iraisan'ny ¢ 6.
HAMAKY BEBE KOKOA >>
Inona ny rafitra fanosorana mandroso sy ny fitsipika miasa?
Ny fomba fiasan'ny rafitra: 1. Ny rafitra mandroso dia misy ny paompy fanosotra herinaratra, mpaninjara miandalana, singa fantsona ary fanaraha-maso ny herinaratra. 2. Ny menaka dia arofanina, zaraina amin'ny alàlan'ny mpaninjara miandalana, ary farany ampitaina amin'ny teboka fanosorana. 3. Ny menaka ...
Ahoana ny fampiasana ny rafitra fanosorana amin'ny fitantanana lubrication feno sy fikojakojana ny equ ...
Ny 2/3 amin'ny tsy fahombiazan'ny fitaovana dia mifandraika amin'ny fanosorana. Amin'ny alàlan'ny fitantanana lubrication feno dia manampy amin'ny fampihenana ny tsy fahombiazan'ny fitaovana sy ny fihinanana lubrication, manatsara ny fahamendrehana sy ny fisian'ny fitaovana ary mamorona lanja ara-toekarena mivantana ho an'ireo orinasa. Lubricatio feno ...
Famakafakana tranga ho an'ny fanosorana afovoany an'ny mpampindram-bola afovoany Jianhe
Ny fanosorana afovoany dia ny fanosorana teboka fanosotra marobe amina am-polony miaraka amin'ny fifehezana paompy amin'ny alàlan'ny mpanara-maso. Ny rafitra fanosotra afovoany miandalana dia afaka manampy menaka ireo ampahany mila fanosotra amin'ny lehilahy ara-potoana, raikitra, be isa ary milahatra ...
Adiresy:No.5 Lalana Beizhuang Atsinanana, Faritra fampandrosoana ara-toekarena, Jiaxing ， Zhejiang, Sina